Ugbo Ballindrum - N'ime obodo
Ballindrum Farm B&B na-enweta ihe nrịba ama dị na mpaghara ịma mma ime obodo na ndịda Kildare, otu awa site na Dublin, ezigbo ntọala iji chọpụta Kildare.
N'etiti obodo na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Ballindrum Farm B&B bụ naanị nkeji ise site na M5. Site na nlele kaadị eserese, ebe obibi a dị n'ugbo mmiri ara ehi na -arụ ọrụ, a na -enwetakwa nlegharị anya efu na -arịọ.
Beech Lodge na-enye nhọrọ ụlọ ezumike onwe onye nwere kpakpando anọ. Enwere ike ịnweta oche nkwagharị zuru oke yana ime ụlọ abụọ, otu ensuite abụọ na ejima nwere ụlọ ịsa ahụ nwere ike ịnweta.
Ugbo Ballindrum nwekwara ike lekọta ndị otu na-achọ nkwụsị na-enye ume ọhụrụ na tii na scones a na-eme n'ụlọ. Njegharị ugbo na -adị, ekwesịrị ibute ya ụzọ.
Bed & Breakfast, Isiri onwe nri, Ezigbo ezinụlọ, Okwesiri